China 50ml 250ml rectangular canted mutsipa rabhoritari epurasitiki rinenge tsika chinu nokutengesa uye kugadzira | ama
Cell tsika ndiro
Cell tsika chinu
Cell tsika dhishi
Cell Culture tishu tsika
Filler mhando dzakasiyana mapurasitiki yakanaka mutengo eppendorf ...
Siyana Color Plastic Micro Pipette Tip
Lab zvokurapa mutengo mapurasitiki kuraswa chena magirazi M ...
Plastic 1ml 1.5ml 1.8ml 5ml 6ml 10ml cryo chubhu
High unhu kuraswa chena 70mm Petri dhishi cont ...
75mm kuraswa yezvirwere Petri dhishi nenzeve
ISO & CE mvumo kuraswa mapurasitiki kana girazi 150m ...
50ml 250ml rectangular canted mutsipa rabhoritari epurasitiki tishu tsika chinu
tishu tsika chinu
50ml 250ml rectangular canted mutsipa yezvirwere epurasitiki tishu tsika chinu
Plastic Sero tishu tsika chinu
Transparent epurasitiki Sero tishu tsika chinu
25ml, 50ml, 75ml, 250ml, 600ml etc.
Seal pakavha uye Kamudzira pechifukidziro
tsvakurudzo Laboratory Zviridzwa
Made 100% mhandara polystyrene sero tishu tsika chinu
Wegamma mwaranzi, Erekitironi danda, UV mbereko
Ama kana customized
50000 Piece / Pieces por Day rabhoritari epurasitiki sero tishu tsika chinu
Qingdao chiteshi rabhoritari epurasitiki sero tishu tsika chinu
Click on chinyorwa uye kutenga " 50ml 250ml rectangular canted mutsipa rabhoritari epurasitiki tishu tsika chinu"
Cell zvigadzirwa kunyanya zvinosanganisira muchitokisi tsika dhishi , sero tsika ndiro uye sero tsika bhodhoro isu takanzwa pamurayiro chigadzirwa saizi uye manyorerwo makazadziswa, unogona kusangana mutengi kuti kudiwa.
Cell tsika chinu kuita zvakasiyana-siyana unyanzvi kubudiswa, akadai yakaderera mapuroteni adsorption, TCT / okisijeni plasma, uye Mbeu dzakauchikwa plasma, Collagen kubata with.The Cell tsika chinu kunogona kuvandudza sero kukura environment.More inoita kuti masero kuturika netsika uye Stick rusvingo sero tsika. Cell tsika Bhodhoro anogona kuzadzisa sero kuwanda pasina Kusiyanisa. Cell tsika chinu zvinogonawo kushandiswa muunganidzwa uye kuchengetera zvisingawanzoitiki ivhu.
Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro muchitokisi tsika zvemichina uye Cell tsika nedende, ndapota andibate zvakananga. Email: 18863608211 (@ 163.com). Kana tinya chinyorwa kuti andibate.
Tinobudisa " 50ml 250ml rectangular canted mutsipa rabhoritari epurasitiki tishu tsika chinu" vari kuunzwa mbishi zvinhu uye vane unhu rokuongorora pachavo chikwata chavo, unhu ndeyechokwadi.
Cell tsika chinuvane-siyana unyanzvi kusarudza from.Our Sero tsika chinuzvemichina yambokurukurwa edu pachedu R & D chikwata kwemakore akawanda. Unogona kutenga zvakawanda, isu rokutsvaka vamiririri pachokwadi
Click kutenga " 50ml 250ml rectangular canted mutsipa rabhoritari epurasitiki tishu tsika chinu"
25ml Cell tsika chinu
25ml Cell tsika chinu(nemhepo Sero tsika chinu)
50ml Cell tsika chinu
75ml Cell tsika chinu
75ml Cell tsika chinu(nemhepo Sero tsika chinu)
250ml Cell tsika chinu
600ml Cell tsika chinu
" 50ml 250ml rectangular canted mutsipa rabhoritari epurasitiki tishu tsika chinu" vane pamusoro kurapwa uye untreated maviri zvokusarudza. Cell tsika chinuanogona Cell kuturika tsika uye isa rusvingo sero tsika.
Cell tsika chinu ukobvu ndiye dzakafanana, pamusoro pemvura iri inotsvedzerera.
The " 50ml 250ml rectangular canted mutsipa rabhoritari epurasitiki tishu tsika chinu" ane nokurondedzerwa zviviri: chisimbiso pakavha uye Kamudzira viomak.
The Kamudzira pabutiro anogona kunatsiridza nemhepo ine Sero tsika chinu.
Chaiyoiyo zononoka pamitsipa Sero tsika chinu anobvumira chivharo kuti tenderera nokukurumidza kupinda chinzvimbo.
The Sero tsika chinu mutsipa Angle inoita pipette nyore kuwana.
The ngaakuyire arenaceous nzvimbo Sero tsika chinu mutsipa nyore mavara.
Mashoko ose " 50ml 250ml rectangular canted mutsipa rabhoritari epurasitiki tishu tsika chinu" ndiyo Pis.
Rokumusoro mativi Maumbirwe Sero tsika chinu akagadzirirwa kuwedzera placement pakusimba.
Cell tsika chinu inogona ukapisa murwi, zvinobudirira rinoponesa nzvimbo.
Tine dzimwe zvinhu kunze " 50ml 250ml rectangular canted mutsipa rabhoritari epurasitiki tishu tsika chinu" .You need medical supplies and lab supplies to contact me directly.
" 50ml 250ml rectangular canted mutsipa rabhoritari epurasitiki tishu tsika chinu" angashandiswa Chemical Laboratory, chipatara, mhuri, kuchikoro, etc.
Qingdao jindian chinhu mutero vaongorori, akavonga nokuzvitsaurira kwavo.
Ticharamba kutakura nezvokutenda pokufunga yepamusoro uye kugadzirazve unhu zvigadzirwa.
Qingdao Ama Co., Ltd. chakawanikwa 1992, Headquarter muTaiwan uye kugadzirwa chawo muna Qingdao. Zvakanyorwa nyanzvi mukugadzira kuraswa zvokurapa yokuedzwa products.AMA akagadza yose yakatarwa kwokuoma rwomumwoyo yepamusoro kudzora maitiro uye vakapfuura ISO9001, ISO13485 uye CE kutenderwa.
Ama akaita kubudirira zvikuru: Zviri Vacuum ropa chubhu ,bvunzo chubhu ,Petri dhishi,Cell tsika chinu uye zvinyama netsika zvikuru takanakidzwa, kunyanya muUnited States, Japan uye Jordan pamusika.
Nditumei kero yenyu. Isu achanunura " 50ml 250ml rectangular canted mutsipa rabhoritari epurasitiki tishu tsika chinu" zvakananga pamaoko enyu.
Professional hwokugadzira magadzirirwo achatsigira yenyu kutenga ruzivo, kuonana 18863608211 (@ 163.com) kuti uwane ruzivo nezve " 50ml 250ml rectangular canted mutsipa rabhoritari epurasitiki tishu tsika chinu" .
Contact 18863608211 [@] 163.com for more products.
Previous: Medical yezvirwere mapurasitiki chena inopisa zvinyama sero tsika ndiro
Next: 50ml 250ml rectangular canted mutsipa rabhoritari epurasitiki rinenge tsika Bhodhoro chinu
90mm X 15mm Sterilized Petri Cell rinenge Culture Dishes
Cell rinenge Culture
Petri Cell rinenge Culture Dishes
zvinyama Culture Kuonekwa Cell Culture Dish
zvokurapa kuraswa 12 tsime epurasitiki muchitokisi tsika ...
Medical kuraswa chena matsime 96 muchitokisi tishu ...
Factory wholesaler mutengo matsime 48 epurasitiki dispo ...
Medical yezvirwere mapurasitiki chena 12 tsime tishu sero ...
kuraswa 96 Zvakanaka Cell Culture Plate
Medical yezvirwere mapurasitiki chena 6 tsime sero tishu ...
Kwete 398E-5, Jiaozhou West Road, Zhongyun 2nd Industry Park, Jiaozhou, Qingdao, Shandong Province, China